यि प्रधानाध्यापक र एउटै स्कुलमा पढाउने शिक्षिकाको हेर्नै नसकिने कक्षाकोठा भित्रको अ’श्लिल भिडियो बाहिरियो, – Gazabkonews
एजेन्सी । लकडाउनपछी विद्यालय खुल्न नपाउदै कक्षा कोठामा यौ’न ली’ला, सर्वत्र भाईरल बनीरहेको यो भिडियो !!\_ प्रेम सबैले गर्छन् ।तर प्रेममा परियो भन्दैमा जहाँ पायो त्यहि मस्ती गर्न खोज्दा नम’ज्जाले ला’जम’र्दोमा परिन्छ पनि ।
।गरिसकिएको बताइएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आ’क्रोशित छन् ! ***यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–३ नयाँबस्तीका दलबहादुर कार्की डेढ वर्ष अटो चलाएर जीविकोपार्जन गर्न खटिनुभयो । ग्रामीण भेगमा अटो चलाएर घर परिवारको खर्च चलाउँदै आएका कार्कीले अहिले भने घरमै ‘इन्टरलक ब्लक’ (सिमेन्टको इँटा) उत्पादन गरी गाउँघरमै बिक्री वितरण गरिरहनुभएको छ ।